सीमित जनशक्तिमा चलेको पशुपति होमियोप्याथिकमा बिरामीको आकर्षण – Sulsule
सुलसुले २०७८ कात्तिक ७ गते १३:०० मा प्रकाशित
एक स्थायी र दुई करारका चिकित्सकबाट चिकित्सालय सञ्चालन भइरहेको छ । मागअनुसारको सेवा दिन कम्तीमा पनि १० चिकित्सक स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गरेकोे चिकित्सालयका प्रमुख डा. प्रेमनारायण श्रीवास्तव बताउँछन् । यो पद्धतिबाट उपचार गर्ने देशभर एकमात्र सरकारी चिकित्सालय यही भएकाले टेलिमेडिसिन र स्वास्थ्य शिविरको समेत माग बढ्ने गरेको छ । विसं २०१० मा पशुपति क्षेत्रमा स्थापना भएको चिकित्सालय २०४२ सालमा हरिहरभवनमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । पशुपति क्षेत्रमै सञ्चालन हुँदा चिकित्सालयमा दैनिक ५०० भन्दा बढी बिरामी आउँथे । तत्कालीन राजा त्रिभुवन पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जाँदा रामनाथ अघोरीले होमियोप्याथिक चिकित्सा पद्धति पनि चाहिन्छ भनेपछि यसको सुरुआत भएको हो । आधुनिक चिकित्सा पद्धतिबाट चित्त नबुझेपछि स्यामुयल हनीम्यानले सन् १७९६ मा होमियोप्याथिक चिकित्सा पद्धतिको आविष्कार गरेका हुन् ।
नेपालमा यो पद्धति सुरु हुनुअघि विसं २००५ मा फैलिएको हैजा नियन्त्रणका लागि कोलकत्ताबाट चिकित्सक बोलाएर निःशुल्क औषधि वितरण गरिएको थियो । प्रभावस्वरुप हैजा नियन्त्रण भएको इतिहास रहेको चिकित्सालय प्रमुख श्रीवास्तव बताउँछन् । यसको प्रभावस्वरुप राणाकालमै ज्ञानेन्द्र मेमोरियल होमियोप्याथिक अस्पताल गुल्मी, धनकुटालगायत जिल्लामा खोलिए पनि पछि बन्द भएको थियो । यो उपचार पद्धतिमा नगण्यमात्रामा औषधि वितरण गरिन्छ । जीवनशैली, आहार, विहारमा ध्यान दिएर रोग ठीक गर्न बिरामीलाई परामर्श दिइने पद्धतिका रुपमा होमियोप्याथिक पद्धति रहेको चिकित्सक डा. रामकुमार अधिकारीले राससलाई बताए । आधुनिक पद्धतिका मेडिकल चिकित्सक पनि फिस्टुला रोगको उपचारका लागि उक्त चिकित्सालयमा धाउने गरेका छन् । एक ठाउँमा छुँदा अर्को ठाउँमा दुख्ने बिरामी पनि चिकित्सालयमा आउने गरेका छन् । बिरामी बढ्न थालेपछि ल्याब, एक्स–रे लगायत यन्त्रको पनि आवश्यकता देखिएको चिकित्सालयमा कार्यरत डा. सरिना अधिकारी बताउँछिन् । चिकित्सालयमा हाल दुई अहेब, चार नर्स, लेखा र प्रशासनमा एक/एक, कार्यालय सहयोगी पाँच जना कार्यरत रहेको जनाइएको छ ।
अस्पतालमा श्यया चलाउन सकिने पूर्वाधार भए पनि जनशक्तिका कारण सम्भव भएको छैन । श्यया चलाउनकै लागि पनि जनशक्तिको थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । यहाँ थाइराइड, पाठेघर, ट्युमर, माइग्रेन, नशा च्यापिएको, छाला, खिललगायत बिरामीको उपचार हुने गरेको छ । पाठेघरको सिस्ट र पित्तथैलीको पत्थरी होमियोप्याथिक औषधिले ठीक हुने गरेकाले यी रोगका धेरै बिरामी आउने गरेका छन् । निजीस्तरबाट भने काठमाडौँ, विराटनगर, झापा, तराईका जिल्ला र बुटवलमा फर्मासहितको चिकित्सक सेवा उपलब्ध छ । निजी स्तरबाट भक्तपुर होमियोप्याथिक मेडिकल कलेज, विराटनगरमा नेपाल होमियोप्याथिक मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहेकामा हाल बन्द भएको जनाइएको छ । यी कलेजबाट उत्पादित जनशक्तिले काम नपाएपछि यसतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण घटेर बन्द हुन पुगेका हुन् ।
भक्तपुर होमियोप्याथिक मेडिकल कलेजका सञ्चालक रविन्द्र पुरी कोरोनाका कारण बन्द भएको कलेज अर्को वर्षदेखि सञ्चालनको तयारी भएको बताउँछन् । पछिल्लो समय विद्यार्थीको पनि यो विषयमा आकर्षण हुन थालेको छ । कोलकत्तामा रहेको नेशनल इन्ष्टिच्युट अफ होमियोप्याथिकले प्रत्येक वर्ष एक जना नेपालीलाई छात्रवृत्ति दिएर एमडी अध्ययन गराउने गरेको छ । विसं २०५७ देखि हालसम्म करिब एक दर्जनले त्यहाँबाट अध्ययन पूरा गरी आएको जनाइएको छ ।